भाग्य र ज्योतिले ठगेको एउटा ‘सडक प्रतिभा ’
निर्भीकजंग रायमाझी काठमाडौं, ३१ भदौ
काठमाडौंको रत्नपार्क र भृकुटीमण्डपवरपर यात्रा गर्दा ठूलो स्पिकर बोकेर सडकमा गीत गाइरहेका मानिसहरू भेटिन्छन् । कोही मादल बजाइरहेका हुन्छन् । कोही बाँसुरी बजाएर पैदलयात्रुसँग सहयाेग मागिरहेका भेटिन्छन् ।
उनीहरू कुनै व्यावसायिक गायक वा वाद्यवादक होइनन् । शारीरिक रूपमा अशक्त भएकै कारण उनीहरू सिप प्रदर्शन गरेर सहयाेग माग्न बसेका हुन् । कोहीको आँखामा समस्या छ, कोहीको हातखुट्टा छैन । कोही बोल्न र सुन्न सक्दैनन् । काेही त दुई पाइला पनि हिँड्न नसक्ने गरी अपाङ्गता भएका छन् ।
सहयाेग मागेर बसिरहेकाे देख्दा उनीहरू धेरै कुरामा असक्षम छन् भन्ने भान आममानिसमा पर्छ । तर, सबै अशक्त र पैसा माग्न बसेका मानिसहरू प्रतिभा र सिपविहीन हुँदैनन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् नारायण सिग्देल ।
धादिङ आदमघाटका सिग्देल भृकुटीमण्डपको सडकपेटीमा मागेर बस्छन् । उनी एउटा माइक र स्पिकर बोकेर गीत गाउँछन् । जसलाई मन पर्छ उसले केही पैसा दिएर जान्छ, जसलाई मन पर्दैन उसले बेवास्ता गर्छ ।
सुन्दा अपत्यारिलो लाग्छ । जन्मजात दृष्टि गुमाएका सिग्देलले बीएडसम्मको अध्ययन गरेका छन् । नेपाली र अंग्रेजी भाषामा राम्राे दख्खल छ । तर, आफ्नो क्षमताअनुसारको काम नपाउँदा उनको गुजारा सडकबाटै चल्दैछ ।
उनी अहिले श्रीमती र छोराछारीसहित बनेपामा बस्छन् । बनेपामा बस्ने मान्छे किन काठमाडौंमा त ? जवाफमा उनी भन्छन्, ‘आफू बसिरहेको ठाउँमा माग्न बस्दा कसले पत्याउँछ र ? फेरि एउटै मान्छेले सबैले सधैं सहयोग गरिरहन पनि त सक्दैन ।’
यति भनेर सिग्देल मुस्कुराए । माग्न बसेकोमा उनमा ठूलो ग्लानि पनि छैन । माग्न बस्दा पनि गीत गाइरहेका छन् ।
उनले तौल नाप्ने मेसिन राखेर पनि गुजारा चलाए । कहिले घडी, रूमाल बेच्थे । तर, त्यसबाट खान पुग्ने पैसा आर्जन नभएपछि उनी बाध्य भएर सडकमा आउनुपरेको दुःख सुनाउँछन् । भन्छन्, ‘परिवार पाल्नै पर्‍याे, एउटा न एउटा काम नगरी कसरी बाँच्न सकिन्छ र ?’
३८ वर्षीय सिग्देललाई काभ्रे र काठमाडौंमा चिनेजानेका धेरै मानिसले ‘नारान दाइ’ भनेर बोलाउँछन् । उमेर धेरै नभए पनि उनी उमेर काटिसकेको जस्तो देखिन्छन् । यसैले धेरैले उनलाई दाइ नै भन्छन् ।
राज्यसँग झनै दुःखी
सिग्देलले बाल्यकालमा स्कुलको केही छात्रवृत्ति पाएर पढ्न पाए र ब्रेलको सहयोगमा उनले पढाइ सुरू गरे । अनेक दुःख सहेर एसएलसी पास गरे । तर, उच्च शिक्षा पढ्नका लागि उनलाई झन् सकस भयो ।
एसएलसी पास गर्दासम्म उनमा अध्ययनको भोक बसिसकेको थियो । पढाइ बीचमा छाड्न मनले मानेन । अन्ततः उनले काठमाडौं आएर क्याम्पस पनि पढे । कहिलेकाहीँ कुनै संस्थाले सहयोग पनि गर्‍याे । तर, त्यसले उनको पढाइ पूरा गर्न सकेन ।
आफैंले सानोतिनो काम गरेर उनले बीएडको पढाइ पूरा गरे । तर, तेस्रो वर्षको परीक्षा छुटेर उनको प्रमाणापत्र पाउने धोको अधुरै रह्यो । यसपछि पनि उनले आफ्नो अध्ययनको गति रोकेनन् । पुस्तकालयबाट ब्रेल लिपिमा लेखिएका पुस्तक ल्याएर रातिराति पढ्न थाले । आफ्नो अध्ययनबारे कुरा गर्दैगर्दा सिग्देल भन्छन्–
‘साहित्य पढेँ, इतिहास पढेँ तर नसिब (भाग्य) पढ्न सकिनँ ।
ज्ञानको ज्योति त पाएँ, तर आँखाको पाइनँ ।’
कुरा गर्दा लय हालेर कुरा गर्ने बानी छ उनको । यसैले त उनको भाषा कवितात्मक छ, भावनात्मक छ । अहिले रत्नपार्क आसपास स्पिकर बोकेर दुःखका गीत गाइरहेका छन् ।
आममान्छेले माग्ने भनेर दुत्कार्दा समेत उनले आफ्नो आत्मविश्वास गुमाएका छैनन् । मागेर पनि दिनमा कहिले ४ सय कहिले, ५ सय रुपैयाँ कमाउने उनले अत्यन्त कष्टसँग परिवार पालेका छन् ।
श्रीमती पनि दृष्टिविहीन छिन् । आयआर्जनको दिगो स्रोत छैन । सिग्देलले पढेअनुसारको काम पाएका छैनन् । सिप र पढाइ हुँदा पनि राज्यले वास्ता नगरेको प्रति उनकाे ठूलाे गुनासाे छ । राज्यका अनेक निकाय धाइसके पनि कुनै निकायबाट सहायता नपाएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गरिबको राज्य ल्याउँछौ भनेर देशमा दशकौं लामो संघर्ष भयो तर राज्य फेरि पनि सामन्तकै आयो ।’
बनेपामा परिवार पाल्न नसक्ने स्थिति आएपछि सिग्देल असोजकाे पहिलो हप्ता गृहजिल्ला धादिङ नै फर्कने योजनामा छन् । भन्छन्, ‘बनेपादेखि धादिङसम्म सामान लान गाडीले १५ हजार मागेको छ । त्यति ठूलो रकम मसँग छैन ।’
बनेपा नगरपालिका वा कुनै सहयोगी मनले अलिकति मात्रै सहयोग गर्दिए पनि परिवारलाई घर फर्काउन सक्ने उनी बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १, २०७६, ००:०४:००
नेकपा सचिवालयमा अर्थमन्त्रीको जवाफ : एमसीसी पास नभए वैकल्पिक व्यवस्था